IBC2019 တွင်အိုင်ပီပေါ်မှ Apantac KVM ကိုပြသသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » IBC2019 မှာ IP ကိုကျော် Apantac ဟန်ပြ KVM
OpenGear များအတွက် IP ကိုကဒ်ကျော်နယူး KVM; Fiber နှင့်အတူ IP ကိုတိုးချဲ့ကျော် KVM
Apantac, မြင်ကွင်းစုံ, ဗီဒီယိုမြို့ရိုး, extension ကိုများနှင့်အချက်ပြအပြောင်းအလဲနဲ့ဖြေရှင်းချက်၏နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုထုတ်လုပ်သူကရပ်တည်ချက် 2019.E8 အပေါ်လာမည့် IBC 43 event မှာတခုအဖြစ်တံ့သော IP ကိုဖြေရှင်းနည်းများ, ကိုကျော်က၎င်း၏အသစ်အ KVM ကြေငြာလိုက်သည်။
openGear များအတွက် IP ကိုကျော် KVM
ယင်း၏မျိုးဖြေရှင်းချက်၏ဤပထမဦးဆုံးစျေးကွက်အပေါ်မရရှိနိုင်ပါက IP ဖြေရှင်းချက်ယနေ့ကျော်အရှိဆုံး modular နှင့်အရွယ်မှာ KVM တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယင်းနှင့်အတူပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါ Apantac IP ကိုလက်ခံကာ Off-the-ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်း Gigabit Ethernet ကျော် KVM ကမျိုးစုံသည်အသုံးပြုသူများမျိုးစုံကွန်ပျူတာများမှ access ကိုရှိသည်ဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ချဲ့ KVM switch အဖြစ်လည်ပတ်သောသို့ပြောင်းပါ။
အဆိုပါ openGear ကိုယ်ထည်များအတွက်အသစ်ဩဃ-KVM-IP-TX ကဒ်နှစ်ခုကိုအဓိကအကျိုးခံစားခွင့်စသေညျ။ ပထမဦးစွာမဟုတ်ဘဲနည်းပညာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများဧည့်ခန်းထဲမှာအရင်းအမြစ်ကွန်ပျူတာ၏အသီးအသီးအဘို့အဦးချင်းကို standalone ဂီယာသေတ္တာများ အသုံးပြု. ထက် 10 မှတက်ဩဃ-KVM-IP-TX ကတ်များတစ်ခုတည်း power supply ကို အသုံးပြု. တစ်ခုတည်း openGear2ru ကိုယ်ထည်တွင်တပ်ဆင်နိုင်ပါတယ် (be နိုင်ပါတယ် မလိုအပ်တဲ့) ။ ဒုတိယ, ကတ်များအပေါငျးတို့သ openGear Dashboard ကိုဆော့ဖျဝဲမှတဆင့်ဘုံ configuration များ, ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအင်တာဖေ့စရှိသည်။
ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် System Integration လည်းထံမှကွဲပြားခြားနားသောကတ်များရောနှောနှင့်ကိုက်ညီနိုင်ပါတယ် Apantac နှင့်၎င်းတို့၏လျှောက်လွှာနှင့်လိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်. တစ်ခုတည်း openGear ဘောင်ထဲမှာမျိုးစုံထုတ်လုပ်သူ။
အဆိုပါကတ်များကိုသူတို့အားသည်အခြားအခြေအနေများတွင်ဖိုင်ဘာ SFPs installed အခါဝေးလံခေါင်သီ switches များချိတ်ဆက်ထားသောသို့မဟုတ်ရိုးရိုး RJ45 SFPs ခံရဖို့ခွင့်ပြု SFP slot နှစ်ခုတပ်ဆင်ထားကြသည်။ ဒါဟာအရှင်အမျိုးမျိုးသော system ကို configurations addressing, အသုံးပြုသူများ extension ကိုအကွာအဝေးတိုးချဲ့ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
Fiber Output နှင့်အတူ IP ကိုသီးခြားတိုးချဲ့ကျော် KVM
Apantac'' s ကိုဖိုင်ဘာဂီယာကိုဖြည့်ဘို့ရာခန့်ထားသော IP ကိုသွယ်တန်း / လက်ခံကျော်သစ်ကို KVM Apantac'' extension ကိုများအတွက် CATx အသုံးပြု IP ကိုသွယ်တန်း / လက်ခံအစုံကျော် KVM တည်ဆဲ။ အဲဒီဖုန်းတွေကိုအသုံးပြုသူများခွင့်ပြု:
- configurations ထောက်ပြညွှန်ပြဘို့အသုံးပြုသူတစ်ဦး၏ console ကို (ကီးဘုတ်, မော်နီတာ, mouse ကို) နှင့်ကွန်ပျူတာအကြားအကွာအဝေးတိုးချဲ့
- တစ်ဦး switch ကိုရန်ကွန်ပျူတာနှင့် transmitter ကို (TX) ယူနစ်များအကြားအကွာအဝေးတိုးချဲ့
- matrix ကို configurations အတွက် switch ကိုဖို့ console နဲ့လက်ခံ (RX) ယူနစ်ကိုတိုးချဲ့ပါ။
ဧည့်သည်များမှ Apantac'' IBC 2019 8.E43 ရပ် IP ကိုဖြေရှင်းချက်ကျော် KVM ၏ကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးရဲ့ range ကိုစူးစမ်းလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Apantac ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana IBC IP ကိုကျော် KVM မီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေး openGear စာတန်းထိုး စာတန်းထိုး, ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana, မီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေး, IBC 2019-08-23
ယခင်: IBC 2019: အသံလွှင့်ဖြေရှင်းနည်းအသစ်အ် S12T (12G-SDI UHD) OB Van မော်ဒယ်တင်ပြ
နောက်တစ်ခု: Bonneville ဆီယက်တဲလ် Media Group သို့အဖွဲ့အစည်းပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုသည်းခံ